Posted by zizawa ⋅ 10/06/2010 ⋅ 40 Comments
ရာဇ၀တ်မှုကို ကောင်းတယ်လို့ ဘယ်သူမှ ပြောမယ်မထင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရွေးကောက်ခံရဖို့ မဲဆွယ်တဲ့အခါမှာ ရာဇ၀တ်မှု လျော့ကျအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးပြီး မဲဆွယ်တာတွေကို မကြာခဏ ကြားဖူး တွေ့ဖူးကြမှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် ရာဇ၀တ်မှု crime ဟာ တကယ်ပဲ မကောင်းဘူးလား။ လူတယောက် အသက်ရှင်ဖို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အဆုတ်တခု လိုအပ်သလိုမျိုး လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု ကျန်းကျန်းမာမာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရာဇ၀တ်မှုဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆတခုကို ဒီအခန်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။
ဒီအဆိုကို စပြောသူက ပြင်သစ်လူမျိုး Emile Durkheim။ ဂူဂယ်မှာ သူ့နံမယ်နဲ့ crime ဆိုပြီး တွဲရိုက်ကြည့်ရင် သူနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ တသီကြီးတွေ့ရမယ်။ Durkheim ဟာ လူမှုဗေဒခေါ်တဲ့ sociology ဘာသာရပ်ကို အများကြီး အကျိုးပြုသွားသူအဖြစ် Karl Marx နောက် Max Weber တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူ ပူးတွဲ အသိအမှတ်ပြုခံရသူ ဖြစ်တယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 10/06/2010, 23:36
ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်တယ်ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုက ကျွန်တော့်အတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ Durkheim အယူအဆကို စိတ်ဝင်စားရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုမန်းကို ရှာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိသေးတဲ့လူတွေကို မိတ်ဆက်ပေးရုံသက်သက်ပါ။ နောက် ကျေးဇူးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြင်းကြခုံကြတာတွေမှာ Durkheim ရဲ့ အယူအဆနဲ့ နားလည်လို့ရတာကို တွေ့မိလို့ မျှလိုက်တာပါ။
Posted by zizawa | 11/06/2010, 17:17
ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ တကယ်ပဲ မကောင်းဘူးလို့ပဲ ထားလိုက်ပါဗျာ။ ကိုမန်းကိုကို ပြောသလို အမဲရှိလို့ အဖြူရှိတာ။ ဒါ့အကြောင့် အမဲဟာ အဖြူဖြစ်တည်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြူလိုပဲ ညီတူအစွမ်းသတ္တိရှိတယ် (သို့) ကောင်းတယ်လို့တော့ ယူဆစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ထိုယူဆချက် မှန်မမှန်ကျားကန်ပေးနိုင်မယ့် ideology တွေ philosophy တွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးစွာ သက်သေပြစရာလဲ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ဒီလို လောဂျစ်အရ ရုတ်တရက် မှန်သလိုလိုထင်ရတဲ့ အယူမျိုးတွေ ဘာသာတရားတွေမှာလဲ ပေါ်ဖူးပါတယ်။ ဥပမာ အရှင် ဥက္ကဌရဲ့ လူသေလူဖြစ်လိုမျိုး။ အကြောင်းအရာ သဘောအရ မဆိုင်ပေမယ့် logical paradoxes အရတူတယ်ထင်လို့ ဆွဲယူဥပမာပေးလိုက်တာပါ။
Posted by Nanda | 11/06/2010, 18:02
ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတာထက် မကောင်းလို့ကို ရာဇ၀တ်မှုလို့ Durkheim ကပြောချင်တာပါ။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ မိုးပေါ်က ကျလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုက လုပ်ရပ်တခုဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ လက်ခံထားတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေ နှုံးစံတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ အတွက်သာ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် ခေါ်ဆိုခံရတာလို့ Durkheim ကပြောတာပါ။
Posted by zizawa | 11/06/2010, 22:28
ရှင်းတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်တာက Durkheim ပါ၊ ကိုဝတုတ် ဝေမျှတယ်ဆိုတာလည်း လက်ခံပါတယ်။ လူ့ဘောင်ကို ဒီလိုပဲတိုးတက်အောင် တဆင့်ချင်း တည်ဆောက်လာခဲ့ကြတာပါ။
Posted by မန်းကိုကို | 12/06/2010, 09:30
ဟားဟား….ဒါဆိုရင် အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် “ရီတာ နဲ့ ကိုပေါက အနစ်နာခံ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် လို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြွေးကြော်လိုက်ဖို့် အချိန်မီသေးတယ်ထင်ရဲ့်။ ကျေးဇူးသိတတ်သူတွေအနေနဲ့ ကျနော်နဲ့ ရီတာကို အမြန်ဆုံးလာပြီး တန်းစီကျေးဇူးတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။း-)
Posted by kopaw | 11/06/2010, 02:03
Posted by RITA | 11/06/2010, 04:30
(((ဟားဟား….ဒါဆိုရင် အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် “ရီတာ နဲ့ ကိုပေါက အနစ်နာခံ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် လို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြွေးကြော်လိုက်ဖို့် အချိန်မီသေးတယ်ထင်ရဲ့်။ ကျေးဇူးသိတတ်သူတွေအနေနဲ့ ကျနော်နဲ့ ရီတာကို အမြန်ဆုံးလာပြီး တန်းစီကျေးဇူးတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။)))
Posted by Rita | 11/06/2010, 12:46
I agree with Ko Wa Tote.
Posted by Bino | 12/06/2010, 13:02
(sorry for mixed up Myanmar and English language due to my time constraint)
I don’t know about others but I think that Ko Paw, NLS, Rita wrote about “ကျေးဇူးတရား “topic in Burmese and we ,Burmese, read those posts and most of us, understood the same way because we took meaning according to their words though they might intend to write different meaning.
Me, as well, I did not get what they meant on their posts; instead I got against feeling according to the meaning which I got from their posts. That is not because I amatypical Burmese that is because I think those ideas against many societies (not only Burmese societies) which I know so far. You said, you don’t think Ko Andy, Ko Paw, Rita (NLS)posts are mutually exclusive, but obviously, many of readers got what Ko Andy meant and did not get what Ko Paw, Rita (NLS)meant. Probably, many readers got ” အ မြင်လွဲ” but I remember one of prof’s said when we wrote our thesis that you must write your theme to make understand for those people who have even zero level of knowledge in your professional area. Well, “ကျေးဇူးတရား” is not so difficult subject for all of us. That is simple reason that why many support Ko Andy and…
Posted by TD | 12/06/2010, 19:21
အကောင်းဆုံးကတော့ အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် Durkheim ရဲ့ crime နဲ့ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းကို တိုက်ရိုက်ဖတ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် TD မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော် ကြိုးစားဖြေကြည့်မယ်။
ပထမမေးခွန်းကို ကျွန်တော်သဘောပေါက်သလောက် ဖြေကြည့်ရရင် စည်းလုံးမှု မရသေးဘူးဆိုတာ ဘာကို ကြည့်ပြောလဲ မသိဘူး။ စစ်အစိုးရက နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်နေတာတွေကို လူတွေကရာဇ၀တ်မှုအဖြစ်နဲ့ မြင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရာဇ၀တ်မှုကို အောင်အောင်မြင်မြင် တရားစွဲနိုင်တာ မနိုင်တာက နောက်တပိုင်းပဲ။ ဥပမာဗျာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်ဝေတာနဲ့ ထောင်ဆယ်နှစ်ကျော် ချတာကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုကတရားတယ်၊ ရာဇ၀တ်မှု မမြောက်ဘူးလို့ မြင်တယ်ဆိုရင် နောက်တခါ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို သာမန်လုပ်ရပ်လို့ သဘောထားနေရင် တရားတယ် မတရားဘူးဆိုပြီး နက်နက်နဲနဲ ခံစားမနေရင် ဥပမာဗျာ ဦးဝင်တင်လို ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို ထောင်ထဲမှာ သွားတွေ ရိုက်ချိုးတာကို ဗမာပြည်သား ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက် ၉ ယောက်လောက်က မတရားမှု အဖြစ်မမြင်ဘဲ ဒါလုပ်မှာဘဲဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောနေရင် အဲဒိလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျွန်တော်တော့ မနေရဲဘူး။ ဗမာပြည်မှာ ဒီလိုလုပ်ရပ်ကို ဘယ်သူကမှ တရားတယ်မပြောဘူးလို့ ယုံတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဇာဂနာ့စကားငှားပြောရရင် ရင်ထဲ ဒေါသထွက်ရုံမှအပ ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးတာသာ ရှိတာ။ အနည်းဆုံးဗျာ ဒါကို မတရားမှု ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သေးရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ bankrupt မဖြစ်သေးဘူး။ အဲဒိအချက်မှာ လူတွေဟာ စည်းလုံးကြတယ်လို့ ထင်တယ်။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။
ဒုတိယမေးခွန်းက အရမ်းကောင်းတယ်။ (တကယ်ပါ patronize လုပ်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါ) ပထမမေးခွန်းကို ဖြေထားတဲ့ထဲမှာ ဒုတိယမေးခွန်းလဲ တစိတ်တပိုင်းဖြေပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Durkheim ရဲ့ အမြင်ကို ပြန်ကောက်ရရင် လူတွေက သူတို့ရဲ့  collective conscience ကိုထိပါးတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်တယ်လို့ Durkheim ကပြောတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ လူအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်တာ။ ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အယူအဆ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံနဲ့ morally acceptable views/behavior နဲ့ လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိတဲ့ အယူအဆ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ကတ္တားခြား လိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုလို့ Durkheim ကပြောချင်တာ၊ ရာဇ၀တ်မှုဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကြားမှာ နယ်နမိတ် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ။ အဲဒါကြောင့် Crime brings together honest people and concentrates them လို့ပြောကြတာ။ တချို့ လုပ်ရပ်တွေက morally reprehensible ဖြစ်တာ၊ ရွံ့ စရာကောင်းတာ ရှင်းတယ်။ ဥပမာ မကြာသေးခင်က သြစတြီးယားမှာ ဖအေက သမီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်တဲ့အမှု။ Joseph Fritzl လို့ရှာရင် တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒီလိုရွံ့ စရာ ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်တာ။ အကယ်၍သာ ဒါကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဖူးဆိုရင် ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျင့်ဝတ်အဆင့်အတန်း moral standard ဟာ ဘယ်လောက် နိမ့်ကျနေမလဲ။ အဲ့သလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ TD ပြောသလိုပဲ ဖအေက သမီးကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ရာဇ၀တ်မှု မမြောက်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်မှာဘဲ။ အဲဒိလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေကိုမနေနဲ့တော့။
Posted by zizawa | 12/06/2010, 23:51
ကိုဝတုတ်ရေးတာ ခုမှနည်းနည်း လိုရင်းဖက် ရောက်လာပြီထင်တယ်၊ ပို့စ်မှာတုန်းက သိပ်လိုရင်းမရောက်လို့ သဘောတွေကွဲနေတာလို့ ထင်မိတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 13/06/2010, 07:01
ဆရာရယ် လိုရင်းတွေက သိပ်များတယ်။ ကျွန်တော်သောကြာသားဆိုတာ တချို့ လည်း မှန်းလို့ရနေလောက်ပါပြီ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စာကြွေးလည်းပြီးအောင် ဆပ်ပါ့မယ်။
Posted by zizawa | 13/06/2010, 08:07
အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တို့ ရေးလိုက်တဲ့ ဘယ်နေရာက တလွဲတွေးမိစေတာလဲ ဆိုတာကို စာကြောင်း၊ စကားလုံးကို အတိအကျ ဥပမာဆွဲထုတ် ညွှန်းဆိုပြီး အထောက်အထားနဲ့ ပြောစေချင်မိတယ်။
ဘယ်နေရာကတော့ ဘယ်လို နားလည်မှု လွဲစေပါတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။
Posted by RITA | 14/06/2010, 01:30
Posted by tint oo | 13/06/2010, 00:36
ကိုတင့်ဦးပြောတာက လူ့သဘောသဘာဝနဲ့ ပိုဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဂရိတွေရဲ့ tragedy ပြဇာတ်တွေ မှာလိုပဲ၊ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ဟာ ဆိုးတာတွေဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ပရိသတ်က ခွင့်လွတ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် နောက်ခံလေးတွေကလည်း ရှိနေသေးတာကိုး။
Posted by မန်းကိုကို | 13/06/2010, 06:59
Posted by tint oo | 13/06/2010, 09:07
ကနောင်ကိစ္စကို ကိုမန်းကိုကိုပြောသလို ပြောမယ်လို့ တွက်မိလို့တမင် ပင်းတလဲ ၊ စကြ်ာ၊မက္ခရာနဲ့သုံးဆယ်တို့ ကို ထည့်ပြတာပါ အဲဒီလူတွေလဲ ကနောင်နဲ့တတန်းတည်းနှမြောထိုက်သူတွေပါဘဲ။ဒါပေမဲ့ကနောင်ကို promotion ကကောင်းလွန်းတော့ ကျန်တဲ့ သူတွေမှိန်နေတာပေါ့ဗျာ။
Posted by tint oo | 13/06/2010, 09:14
ခုတလောလဲ စီကနဲ ညံကနဲတွေမှာ ကိုယ့်ဘက် သူ့ ဘက်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအများပါတယ်လို့ မြင်တာဘဲ
Posted by tint oo | 13/06/2010, 09:17
ကိုဝတုတ် ကျမ နားလည်သလောက် ဝင်ပြောပါရစေ၊ ရာဇဝတ်မှူ တခုကို လူတွေရှုံ့ချတာ မချတာနဲ့ တိုင်းတာလို့မရနိူင်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျမတုိ့ဟာ ကောင်းဆိုးခွဲခြားတတ်ဖို့ မိဘက အစ၊ ပြီးတော့ ဆရာသမား၊ ပြီးတော့ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရတာပါ။ သေချာတယ် ကလေးတယောက်ဟာ သူလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း သူများဆီက အခွင့်အရေးရရင် ခိုးယူမိမှာပဲ၊ သူ့ခေါင်းထဲမှာ ခိုးမှုမြောက်တယ်လို့မှ မသိပဲ။ လိုချင်တာပဲသိတာကိုး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ရာဇဝတ်မှုလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ မိဘ ဆရာက ဘယ်လောက်ပဲ သင်ပါစေ ခိုးတတ်တဲ့ ကလေးဟာ ခိုးမှာပဲ။ နဲနဲ ကြီးလာလို့ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေးကို လက်ခံလာလို့ပဲ ဖြစ်စေ၊ ငါ့ပစ္စည်း သူများခိုးရင်ရော ငါဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေးရှိလာလို့ပဲ ဖြစ်စေ၊ မကောင်းမှုလို့သိပြီး မလုပ်တော့တာ။ ဒါတောင် ခိုးချင်တဲ့သူက ခိုးအုံးမှာပဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လောက်ပဲ အသားတကျ ဖြစ်အောင် ပြောဆို ညွှန်ပြပြ တဦးချင်းစီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ပေါ်မှာပဲ တည်နေတယ်။ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု ဆိုတာက စကားလုံးသက်သက်ပါ။ လူသတ်တာကို ကောင်းမှုလို့ နာမည်တပ်ကြည့်ပါလား…ကောင်းမှုတွေ များများလုပ်ကြဟေ့ဆိုတာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်နိူင်တော့ဘူး။ တကယ်ကြည့်ရမှာက အလုပ်အပေါ်ကို ကြည့်ရမှာ၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်သည် လူတဦးတယောက်အပေါ် မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ရင် ဒါ ရာဇဝတ်မှုပါပဲ၊ အပြစ်ပေးနိူင်တဲ့ သိသာထင်ရှားပြီး ပုဒ်မတပ်လို့ရတဲ့ ရာဇဝတ်မှု ရှိသလို၊ ပုဒ်မတပ်လို့မရတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့လုပ်ရပ်တွေဆို ရာဇဝတ်မှုလို့ လူတွေမသိနိူင်လို့ ရှူံ့ချခံရခြင်းမရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ထားတာကို ကိုယ်ပဲ သိနေတယ်။ ဘာသာရေးရှုထောင့်က ကြည့်ရင်တော့ အပြစ်မလွတ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုရယ်လို့ မရှိနိူင်ပါဘူး။
လင့်ခ်ယူသွားကြောင်း ခွင့်တောင်းပါတယ်ရှင် 🙂
Posted by ချစ်ကြည်အေး | 13/06/2010, 12:56
လူတွေ ရှုံ့ချတယ် ဆိုတာထက် လက်မခံတဲ့အတွက် မနှစ်မြို့ တဲ့အတွက် crime ဖြစ်ရတယ် ပြောလည်း သဘောက မကွာပါဘူး။ ရှုံ့ ချတယ်ဆိုတာကတော့ နည်းနည်း ပိုပြင်းထန်တာပေါ့။
Posted by zizawa | 13/06/2010, 13:28
မချစ်ကြည်အေး ပြောတာ ပြန်ဆက်ရရင် ခလေးတယောက်က ဘယ်လောက်သင်သင် တချို့ ငတတ်ပြားဇာတာ ပါလာရင် ခိုးမှာဘဲ ဆိုတာ။ ဆိုတော့ ဒီခလေးဟာ ခိုးတယ်ဆိုပါတော့။ သူ့လုပ်ရပ်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံထားတဲ့ norm တွေကိုချိုးဖောက်နေပြီ။ အဲ့ဒါကို ဘာလို့ရာဇ၀တ်မှု မဟုတ်ဖူးလို့ မချစ်ကြည်အေး ဘာလို့ ပြောလဲမသိဘူး။ အဲဒါရာဇ၀တ်မှု မဟုတ်ရင် အဲဒိခလေးကို နောက်မခိုးနဲ့လို့ ဘယ်ဆုံးမတော့မလဲ။ ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်လို့သာ ခိုးတဲ့ခလေးကို နောက်မခိုးဖို့ ဆုံးမတာ မဟုတ်ဖူးလား။ ဆုံးမတာကို လက်ခံတာမခံတာက နောက်တပိုင်းပေါ့ဗျာ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လောက်ပဲ ညွှန်ပြပြ ခိုးတဲ့လူက ခိုးမှာဘဲ။ မှန်တာပေါ့။ အဲဒါကိုလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းက ရာဇ၀တ်မှုလို့ဘဲ သတ်မှတ်ပြီးရင် သတ်မှတ်နေမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခိုးမှုဟာ norm တခုဖြစ်လာရင် ဒါရာဇ၀တ်မှု ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ မတရားမှုအဖြစ်တော့ ဆက်ရှိနေနိုင်တယ်။ မတရားမှုကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်တာဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သဘာဝပဲ။ မတရားမှုကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ရင် ဒီလူအဖွဲ့အစည်းဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ နိမ့်ကျတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မှာဘဲ။ ဥပမာဗျာ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း လုယက်ပြီး ချမ်းသာလို့ ရတဲ့နည်းဟာ မတရားဘူးလို့ ပြောမယ်၊ မချစ်ကြည်အေးလည်း ဒါကို သဘောတူမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ရင် ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျင့်ဝတ်အဆင့်အတန်းကို မြင့်တယ်လို့ ပြောမလား။
Posted by zizawa | 13/06/2010, 13:40
ငယ်ငယ်ထဲက အကောင်းအဆိုးကို ပတ်ဝန်းကျင်က လူ့အဖွဲ့အစည်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်လာမယ့် လူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်ဆိုတာကိုက လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ စုပေါင်း လက်ခံထားတဲ့ collective conscience (မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ဘာသာရေး အဆုံးအမ စတာတွေ) ရှိတာကို ပြနေတယ်လို့ မချစ်ကြည်အေး စကားမှာ ၀န်ခံထားပြီးသားလို့ ထင်တယ်။ ဒါတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုးက polarize ဖြစ်သွားတယ်မလား။ TD ကိုပြန်ထားတဲ့ စာမှာ ပါမယ်ထင်တယ်။
Posted by zizawa | 13/06/2010, 13:52
ပထမဦးဆုံး ကိုဝတုတ်ရဲ့ ပို့စ်မှာ ပါတဲ့….
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ လူဖြူလူမဲပြဿနာတွေ မပြီးဆုံးခင် ကာလတွေက လူမဲတွေကို လူဖြူတွေက အလကားနေရင်း ဖိနှိပ်တာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်။ အလကားနေရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့ လူမဲကို လူအုပ်အားကိုးနဲ့ ဖမ်းပြီး ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်တာ(lynch)တွေ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်တော့ လူအုပ်ကိုယ်တိုင်က ကျူးလွန်တဲ့ crime ပဲဗျ။ အဲဒီတုန်းက ဒီလူဖြူတွေဟာ crime ကြောင့် စည်းလုံးကြတာပဲဗျ။ သူများကျူးလွန်တဲ့ Crime ကြောင့်မဟုတ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်တဲ့ Crime ကြောင့်။ ကိုဝတုတ်ပြောသလို honest men တွေရဲ့ စည်းလုံးမှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ လူမသမာတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ပေါင်ဖက်တွေ့။ Birds of the same feather flock together။
ဒါကြောင့် Crime ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျန်းကျန်းမာမာ ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရာကောင်းတခုဆိုတဲ့ လော့ဂျစ်ကြီးဟာ ဖရိုဖရဲနဲ့ ကျဆုံးသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလူဖြူ (lynch-mob) တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ထက် ဆိုးတဲ့လုပ်ရပ်တွေလည်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင် ရှိနေပါတယ်ဗျာ။ မလိုအပ်ဘဲ စကားရှည်နေမှာစိုးလို့ ထုတ်နှုတ်မပြတော့ဘူး။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်က လူဖြူတွေ လုပ်ရပ်နဲ့သာ ကျေနပ်ပါ။
Posted by ကိုပေါ | 13/06/2010, 15:14
kopaw,awide range of literature is available on Durkheim’s concept of crime on the net. But I found this one in particular quite illuminating.
Posted by zizawa | 13/06/2010, 16:42
စည်းလုံးမှုဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကား social cohesion ကိုဗမာလို ပြန်လိုက်တာ။ ကိုပေါပြောတဲ့ စည်းလုံးမှုက unity ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်မယ်ထင်တယ်။
‘အဲဒီတုန်းက ဒီလူဖြူတွေဟာ crime ကြောင့် စည်းလုံးကြတာပဲဗျ’
White men are united on crime??? ကျွန်တော်ပြောတဲ့ စည်းလုံးမှုက unity မဟုတ်ဖူးဗျ။ အဲဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ပြောတာ။
‘ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ လူဖြူလူမဲပြဿနာတွေ မပြီးဆုံးခင် ကာလတွေက လူမဲတွေကို လူဖြူတွေက အလကားနေရင်း ဖိနှိပ်တာတွေ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်။ အလကားနေရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့ လူမဲကို လူအုပ်အားကိုးနဲ့ ဖမ်းပြီး ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်တာ(lynch)တွေ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်တော့ လူအုပ်ကိုယ်တိုင်က ကျူးလွန်တဲ့ crime ပဲဗျ။ အဲဒီတုန်းက ဒီလူဖြူတွေဟာ crime ကြောင့် စည်းလုံးကြတာပဲဗျ။ သူများကျူးလွန်တဲ့ Crime ကြောင့်မဟုတ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်တဲ့ Crime ကြောင့်။ ကိုဝတုတ်ပြောသလို honest men တွေရဲ့ စည်းလုံးမှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ လူမသမာတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ပေါင်ဖက်တွေ့။ Birds of the same feather flock together။’
ကိုပေါပြောတဲ့ အပေါ်က စာပိုဒ်က Durkheim ပြောတာကို ကျွန်တော် ရှင်းပြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တခြားစီပဲ။ Crime brings together and concentrates them ဆိုတာ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုးကို ကတ္တားခြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောတာ။ လူဖြူတွေ unite ဖြစ်ကြတာ စည်းလုံးညီညွတ်ကြတာ သူ့ဟာသူ တခြားအကြောင်းရှိမှာပေါ့။ crime နဲ့ မပတ်သက်ဖူး။
Durkheim ကပြောတာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ culturally relative ဆိုတာ ဒီသဘောပဲ။
ပြောခဲ့သလို TD ကိုပြန်ထားတာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် နောက်အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်ဝင်စားရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း နည်းနည်းရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ပိုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။ Durkheim ပြောတာက သမားရိုးကျ အတွေးတော့ မဟုတ်ဖူး။ အဲဒါကြောင့် တော်တော်များများက ဒါကိုနားလည်ရခက်နေပုံရတယ်။
Posted by zizawa | 13/06/2010, 22:00
အပေါ်မှာ လူအများစုက သဘောတညီတညွှတ်တည်း ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ crime ဥပမာတွေကို ပေးရရင် slave trade က အထင်ရှားဆုံးပဲဗျ။ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အဲဒီလုပ်ရပ် လူ့အဖွဲ့အစည်း (လူဖြူလူ့အဖွဲ့အစည်း)က လက်ခံနေတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်အရောင်းအဝယ်စနစ် ပယ်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ Abolitionist က အနည်းစုမို့လား။
Posted by ကိုပေါ | 13/06/2010, 15:17
I have an impression that you misunderstood what I meant. Anyway, away from my desk and can’t use Burmese fonts. So later…
Posted by zizawa | 13/06/2010, 15:23
Actually it’s not only you, I think many readers don’t get it when they first heard about it. That’s why I urged anyone interested in this to consult Durkheim’s work in English..
Posted by zizawa | 13/06/2010, 15:24
kopaw, you might want to havealook at my reply to TD if you haven’t done so.
Posted by watote | 13/06/2010, 15:53
Posted by ကိုပေါ | 13/06/2010, 23:50
အဲ ကိုဝတုတ် ကျမ ပြောချင်တဲ့ ကလေးအရွယ်က အပြစ်ရှိရင် အရိုက်ခံရတဲ့ အရွယ်လောက်ကို ပြောတာလေ၊ ကလေးထောင်ပို့နိူင်လောက်တဲ့ အရွယ်ကို ပြောတာ မှုတ်ဘူး။ ဘယ်ကလေးက ကစားစရာ တခုခု သူများဆီက ခိုးလာတာကို ရာဇဝတ်မှု တခုအနေနဲ့ ကျမတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ကြလို့လဲ။ မသကာ ဆုံးမပြီး ဒဏ်ပေးရုံလောက်ပဲ ရှိမှာလေ။
မတရားမှုတွေနဲ့ ချမ်းသာနေသူတွေကို တရားတယ်လို့ လုံးဝမပြောနိူင်ဘူး သို့သော် ဝိနည်းလွတ် လုပ်နေကြတဲ့ အခါ မတရားမှုဆိုပေမဲ့ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် ပုဒ်မ မတပ်နိူင်ဘူး ဒါကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလုပ်နိူင်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာ မဆို မတရားမှုတိုင်းကို သိပင် သိသော်ငြားလည်း ရာဇဝတ်မှုအနေနဲ့ စွဲချက်မတင်နိူင်တာကို ပြောတာ။ ရာဇဝတ်မှု မမြောက်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
ခိုးမှုဆိုတာကို တကယ်တမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်ဆို သူတပါးရဲ့ ပစ္စည်းခိုးတာ-သိသာလွန်းပြီး မတရားမှုရော ရာဇဝတ်မှုလို့ပါ အမည်တပ်နိူင်တာရှိသလို၊ အလုပ်ထဲကနေ လစ်တာ-အလုပ်ချိန်ခိုးတာ (ဒါလည်း ခိုးတာပဲနော်) ခိုးမှုလိုပဲ အလုပ်ရှင်အပေါ် မတရားမှုပြုတာ ဒါပေမဲ့ ဒါကို ရာဇဝတ်မှုလို့ မယူဆကြဘူးလေ။ ကျမပြောချင်တာ အဲဒါပါ။ ရာဇဝတ်မှုတိုင်းဟာ မတရားမှုဆိုပေမဲ့ မတရားမှုတိုင်းကို ရာဇဝတ်မှုပါလို့ စွဲချက်မတင်နိူင်ပြန်ဘူး မဟုတ်လား။
ကျမ စိတ်ဝင်စားတာမို့ ဝင်ပြောဖြစ်တာပါ ကိုဝတုတ၊် ဒါပေမဲ့ ကျမက စာဖတ်နာတဲ့သူ မဟုတ်ဘူးရှင့် ဒါကြောင့် ကျမ အမြင်အသိနဲ့ အယူအဆကိုပဲ ပြောနိူင်တာပါ။ စာအုပ်တွေထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ မှားနေရင် ပြောပါလေ နော် 😀
Posted by ချစ်ကြည်အေး | 14/06/2010, 00:40
ကိုဝတုတ်ပြောတဲ့ “ ‘Crime ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျန်းကျန်းမာမာ ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရာကောင်းတခုဆိုတဲ့’
ကျနော် ဘာသာပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ ကိုဝတုတ်ပြောတဲ့စကားလုံးအတိအကျကို လွဲမှာစိုးလို့ အောက်ပါ စာပိုဒ်ထဲက ကူးယူထည့်လိုက်တာပါ။
“လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်း စည်းလုံးမှုကို ဖြစ်ပွားစေတာမို့ ရာဇ၀တ်မှုဟာ တကယ်တော့ မကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ဖူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ ရုပ်ဝထ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ပရဟိတ အသင်းအဖွဲ့တွေလို မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ အရေးပါတဲ့ အရာတခုပဲ။ ”
Posted by kopaw | 14/06/2010, 02:30
Yes , what Ko Paw mentioned was the author words but not exactly, the main point that alarm me is “…မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ အရေးပါတဲ့ အရာတခုပဲ။” by author and “လိုအပ်တဲ့ အရာ[ကောင်း]တခုဆို…” by Ko Paw. What I want to mention is Crime can beapart of society by not asa[good] part.
Posted by zody | 14/06/2010, 03:25
ဟုတ်ပြီ။ သဘောပေါက်ပြီ ကိုပေါ။
Posted by zizawa | 14/06/2010, 05:28
copy, delete ဆိုလို့ ကွန်ပြူတာက copy, delete function တွေ ယူသုံးတယ်ထင်နေဦးမယ်။ ပို့စ်ဆီကို scroll လုပ်လုပ်ပြီး မျက်စိက ကြည့်လိုက် လက်က ကူးယူရိုက်နှိပ်လိုက်၊ စာပိုဒ်နှစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆက်စပ်လိုက်၊ မလိုတာတွေကို ချုံ့လုပ်တာကိုပြောတာချင်ပါ။ ကျနော် ဆက်စပ်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ တလွဲထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဆောရီးပါ။ ကျနော်တော့ ထွက်တယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ သဒ္ဒါနည်းအရ ထောက်ပြရင်တော့ ကျနော့် စာကြောင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ထောက်ပြစရာ မြင်ပါတယ်။း-)
Posted by kopaw | 14/06/2010, 02:49
Zody ပေးတဲ့ ဥပမာ သိပ်အံဝင်တယ်။ ရာဇ၀တ်မှုဟာ ကျန်းမာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှိမဖြစ် ပါနေတာမို့ မကောင်းတဲ့ အရာတခု မဟုတ်ဆိုတဲ့ဝါကျနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဟာ ကျန်းမာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတခု ဆိုတဲ့ ၀ါကျ အဓိပ္ပါယ် မတူဘူး။
မချစ်ကြည်အေးရေ ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ လစ်ဟင်းသလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သလိုလို ရှိတယ်။ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ လူမှုကျင့်ဝတ် (social ethic)မတူဘူး။ social ethic လို့ပြောလိုက်တာကိုက ဒီကျင့်ဝတ်ဟာ လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ မကင်းဘူး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ (တရားဝင် မပြောဘဲ ဖြစ်ဖြစ်) သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။ ဥပမာ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ဆုတက်ယူလို့ မရတာမျိုးပါ။ ရာဇ၀တ်မှုက ဒီ social ethic ကိုထိပါးတဲ့လုပ်ရပ်ကို ခေါ်တာပါ။ အဲ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပေမယ့် အပြစ်ပေးတာ မပေးတာက နောက်တပိုင်းပါ။ အပြစ်ပေးတဲ့ နေရာမှာလည်း အကျဉ်းချတာ တခုတင် မကပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆုံးမအပြစ်ပေးခြင်းအားဖြင့် (not necessarily imprisonment) လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကျင့်ဝတ်တွေကို အားကောင်းစေတယ်မလား။ ခလေး ပစ္စည်းခိုးတယ်ဆို နောက်မလုပ်နဲ့ဆုံးမတဲ့အခါ ဘယ်ဟာက လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာ ခလေးရဲ့ အသိထဲ ပိုပြီးစွဲသွားစေတယ် မဟုတ်လား။
Posted by watote | 14/06/2010, 05:56
ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာ တခုပြောချင်လို့။ တလောကပဲ (ဦး)ကျော်သူကို လူမှုထူးချွန်ဆု ပေးတယ်။ ဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျင့်ဝတ်အဆင့်အတန်းကို ဒီဆုကနေ ဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ဟာ ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက confirm လုပ်လိုက်တာပဲ။
Posted by watote | 14/06/2010, 06:13
မချစ်ကြည်အေး နဲ့ Zody တို့ထောက်ပြတဲ့အပေါ် ကိုဝတုတ် ထပ်ဆင့် ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ အခါ ပို့စ်ရဲ့ လစ်ဟာနေတဲ့ အပိုင်းတွေ၊ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့တွေ ပိုတိတိကျကျဖြစ်သွားပြီး ကျေနပ်ဖွယ် solution တခုကို ရောက်သွားတယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ မြင်မိတယ်။
Posted by Nanda | 14/06/2010, 07:55
အင်္ဂလိပ်စာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကို ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီး ထည့်ရေးစေလိုပါတယ် ဥပမာ social function တို့ ဆိုတာဘာ လဲဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဒါမှမဟုတ် မြန်မာလို အခေါ်အဝေါ်လေး စသဖြင့် ထည့်ပြီးရေးရင်ပိုကောင်းပါမယ်
Posted by မခိုင် | 05/07/2012, 15:50